Odisha Tribal Tour- Tribes Village Tour India. Antsoy ny + 91-993.702-7574
Fantatrao ve, 29% ny mponina ao Odisha no foko? Raha anisan'ireo olona ianao, tia tia olona vaovao ary mahita kolontsaina vaovao, ny Odisha Tribal Tour Sand Pebbles dia safidinao. Miaraka amin'ireo fokonolona 62 samihafa hijerena, ny fizahan-tany Odisha dia mifantoka amin'ny fomban-drazana taloha, ny kolontsaina indizeny ary ny tanàna. Nalaina tamin'ny lalana iray tsy azo ihodivirana ho an'ireo foko, miaraka amin'i Odisha Tribal Tour, natolotr'i Sand Pebbles ary manana fomba fijery manodidina eo amin'ny fiarahamonina sy ny fombafomba efa hatry ny ela. Ny fandaniana takariva iray, raha ny drakma ao Dhemsa no hilalao ny foko dia mety ho fiainam-baovao. Azonao atao ihany koa ny mankafy ny tsena isan-kerinandro any amin'ireo foko foko miaraka amin'ny Odisha Tribal Tour.
Miomàna ianao hizotra amin'ny diany, mihoatra lavitra noho ny eritreritrao ary jereo ny kolontsaina sy ny fivondronan'i Odisha fahiny ary manana traikefa miavaka sy tsy hay hadinoina. Manahirana ny tenanao amin'ny zava-tsarotra iray izay tsy hanome anao fiainana mandritra ny androm-piainana fotsiny ihany fa ho fanandramana fianarana ihany koa. Ny Tour Tribal Village dia mampiavaka ny natiora, ny toerana, ny folklore, ny fety, ny dihy, ny fombafomba, ny zavakanto, ny asa tanana ary ny tantara. Ny zanatany madinika, izay fantatra amin'ny anarana hoe foko, dia mahaliana hatrany ny vahoaka metropolitanina, ary ny mifamadika amin'izany.
Sand Pebbles'Odisha Tribal Tour dia manolotra ny Odisha Tribal Tour Packages sy ny Odisha Village Tour izay hametraka anao amin'ny dia misedra.
Mankany amin'ny seranam-piaramanidin'ny seranam-piaramanidin'i Bhubaneshwar sy manerana ny hotely. Ny fitsidihana ny tolakandro ny tempoly eo an-toerana - Lingaraja, Parsurameswar, Mukteshwar, Brahmeswara & Raja-Rani Temples. Nandritra ny alina tao Bhubaneswar.
Rehefa avy misakafo maraina ho any Puri mitsidika an'i Dhauli (Shanti Stupa), Hirapur (tempolin'i 64 Yogini), Pipli (Village applique work) & Raghurajpur (Tanànan'ny sary). Etsy ankilany koa dia mankafy ireo Chita-hosodoko amin'ny rindrin'ny trano. Nandritra ny alina tao Puri.
Ny maraina vao maraina dia mitsidiha ny Tempolin'i Lord Jagannath, ny Tempolin'i Gundicha sy ny Tempolin'i Loknath. Nitsidika ny Tempoly Sun of Konark (antsoina hoe Black Pagoda), Chandrabhaga Beach ary tanàna kely mpanjono. Overnight at Puri.
Ny maraina taorian'ny sakafo maraina dia nandeha nankany Gopalpur tamin'ny alàlan'ny Barkul. Hipoitra eo amin'ny lalana akaikin'i Barkul ny sarin'i Chilika. Tsidiho ny farihy mba hahita ireo mpanjono manjono mitady tavy, mackerel sy krabs. Tohizo hatrany Gopalpur. Nandritra ny alina tao Gopalpur.
Aorian'ny fitsanganan-tsakafo dia mankany Rayagada mankany amin'ny fitsidihana lohataona mangatsiaka mafana ao amin'ny toby Taptapani sy Tibetan Settlement ao Chandragiri. Ny alina dia ao Rayagada.
Aorian'ny sakafo maraina dia mitsidiha ny Market Soura Tribal, avy eo miverina any Rayagada. Ny alina dia ao Rayagada.
Taorian'ny fitsangatsanganana sakafo maraina ho an'ny faritra Tumudibandha hitsidika ny Kutia Kondh Tribes. Raha niverina nitsidika ny tsenany tany Kotgarh ry zareo. Raha eny, raha avelan'ny fotoana, dia tsidiho ny Dhokra Casting sy Tribal Jewelery manao toerana. Ny alina dia ao Rayagada.
Ny maraina taorian'ny sakafo maraina dia nitsidika ny tsenan'ny Dongria Kondh Tribal tao Chatikona ary avy eo dia nandeha fiara nankany Jeypore nitsidika an'i Desia Kondh sy Mali Tribes vitsivitsy teny an-dalana. Ny alina amin'ny Jeypore.
Rehefa avy nitsidika an'i Onukudelli hitsidika ny tsenam-bokatra malaza ao Bonda Tribes, dia nitsidika ny Gadabas & Didayee Tribes malaza. Ny alina amin'ny Jeypore.
Ny maraina dia manatri-maso ny tsenan'ny foko legioma lehibe indrindra isan-kerinandro any Sanaparoja & Mali any Kundli 65 KMs amin'ny alàlan'ny Sunabeda (tsenam-barotra). Avy eo dia mandehana any Jeypore hitsidika ny Tempolin'i Tompo Jagannath sy Tribal Museum ao Koraput. Ny alina amin'ny Jeypore.
Aorian'ny sakafo maraina, mitondra fiara mankany Gupteswar mba hitsidihana ny Tempolin'ny Tompo Shiva ary vitsy ny foko Dhruba. Avy eo ny tsenany isan-kerinandro ao Baligaon. Ny alina amin'ny Jeypore.
Taorian'ny sakafo maraina mangatsiaka, mitondra mankany Visakhapatnam. Ny tolakandron'ny fahalalahana amin'ny torapasika. Overnight on Vizag.
Rehefa avy nitsidika ny Tempolin'i Simhachalam taorian'ny sakafo maraina. Ny sisa amin'ny andro maimaim-poana. Overnight on Vizag.
Andro 14: FIZARANA
Taorian'ny sakafo maraina, nafindra tany amin'ny seranam-piaramanidina Vizag / Railway Station ho an'ny dia lavitra.
ValidITY :-( THE PRICE FROM 1ST APRIL - 30TH SEPTEMBER, FROM 26TH OCT - 14TH DEC 2018 & FROM 16TH JAN TO 31ST MARCH 2019)
Olona fanampiny amin'ny fandriana 20350 25850 31350 45650
Validity :-( THE PRICE FROM 1ST OCT - 25TH OCT & FROM 15TH DEC 2018 TO 15TH JAN 2019)
Olona fanampiny amin'ny fandriana 24000 31000 37600 54700
Hotely tokony hampiasaina: -
Puri Hotel Naren Palace / Similar Empires / Pride Ananya / Similar Hans Co Co Palm / mitovy May Waves
1) Raha tsy hita ao amin'ny hotely voalaza etsy ambony ireo efitrano, dia hanome hotely sahala amin'ireny ianao.
2: Ao amin'ny Hotel Rayagada & Jeypore dia tsy misy hotely deluxe sy luxury. Tsy misy afa-tsy sokajin'ny AC / mitovy ihany ny sokajy Standard sy Budget.
Tetibolam-panjakana sy fanomezan-dàlana
02-03 Olona Dzire
06 persona Innova
08-10 Olona Mpizaha-tany
Indray alina AC Accommodation ao Bhubaneswar miaraka amin'ny sakafo maraina
Alin'ny roa alina AC ao Puri miaraka amin'ny sakafo maraina
Indray alina AC Accommodation ao Gopalpur miaraka amin'ny sakafo maraina
Telo takariva AC ao Rayagada miaraka amin'ny sakafo maraina
Efatra amin'ny alina AC ao Djypore miaraka amin'ny sakafo maraina
Alin'ny roa alina AC ao Vishakhapatnam miaraka amin'ny sakafo maraina
Mitsambikina any amin'ny farihy Chilika Barkul
Sarin'ny monument ihany amin'ny indiana.
Ny sakafo lehibe toy ny sakafo antoandro sy ny sakafo hariva.
Fandaniana mifandraika amin'ny maha-izy azy manokana
Izay rehetra tsy voalaza ao anatin'io fampidirana io